Chọpụta ụdị njem na Spain | Akụkọ Njem
Ofdị njem na Spain
Mgbe anyị chere echiche banyere njem, anyị anaghị eche na e nwere ụdị dị iche iche, ebe ọbụghị mmadụ niile na-eme njem maka otu ebumnuche. N'ezie enwere mpaghara nwere ụdị njem nlegharị anya ụfọdụ nke ha lekwasịrị anya iji mee ka ọfụma n’obodo ha. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji na-ahụ ụdị njem ndị anyị ga - ahụ na Spen.
O doro anya na Spain bụ mba njem nlegharị anya, nke na-adọta ọtụtụ puku mmadụ kwa afọ bụ ndị chọrọ ịnụ ụtọ ihe dị iche iche, site na gastronomy ruo oghere nkịtị, osimiri ma ọ bụ ọdịbendị ya. Chọpụta ụdị njem nlegharị anya nwere ike ịmasị ịchọpụta na Spain, ebe ọ bụ na e nwere ụzọ dị iche iche iji aga njem.
1 Omenala Turismo
2 Njem njem osimiri
3 Gastronomic njem
4 Mmanya njem
5 Ihe omumu njem
6 Njem njem
7 ime njem ime obodo
8 Ntughari snow
Omenala ndị njem na-abụkarị otu n’ime ihe ndị bụ isi. N'ime ụdị njem a anyị na-agụnye nke enyere na nchọpụta nke akụkọ ntolite, ihe ncheta, ebe ochie na ebe ngosi ihe mgbe ochie. Na Spain anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ mpaghara nwere akụkọ ihe mere eme ha na ebe ndebe ihe mgbe ochie ha. Na Guggenheim na Bilbao ma ọ bụ Prado Museum dị na Madrid ha bụ ezigbo ihe atụ. Ihe ncheta ndị a dịkwa mkpa ebe anyị hụrụ ebe dịka Giralda dị na Seville, Alhambra na Granada, Sagrada Familia na Barcelona, ​​Katidral nke Santiago de Compostela ma ọ bụ nke León, Alcázar nke Toledo, nke Segovia ma ọ bụ nke Thelọ ihe nkiri Roman nke Merida
Njem njem osimiri
Anyị maara na na Spain a ukwuu nke njem na-gbakwasara ya n'ụsọ oké osimiri, ebe ọ bụ na ọ nwere ezigbo ihu igwe. Na mpaghara Mediterenian anyị na-ahụ mpaghara dịka Valencia, mpaghara Catalonia na n'ezie agwaetiti Balearic nwere ebe ndị njem nleta dịka Mallorca ma ọ bụ Ibiza. N'aka nke ọzọ, enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe mmasị n'ụsọ osimiri Andalusia ma ọ bụ ndị kpebiri ịga Canary Islands, nke na-enwe oke ihu igwe n'afọ niile.
Obi abụọ adịghị ya na Spain bụ otu n'ime ebe nwere gastronomy kachasị mma na Europe, yabụ njem njem gastronomic bụ ihe ọzọ dị egwu. N'ebe ugwu, e nwere azụ dị ukwuu na nri azụ. N'ezie mba Basque, Rioja ma ọ bụ Galicia bụ otu n'ime ebe ọkacha mmasị maka gastronomic tourism maka ogo dị elu nke efere na ngwaahịa ya. Na Andalusia anyị hụrụ otu ebe kachasị amasị maka tapas. Na mgbakwunye, na ebe ndị a ọ na-ahụkarị ememme ndị a raara nye gastronomy, nke na-adọta ọtụtụ ndị njem kwa afọ, dị ka Seafood Festival na O Grove, Galicia.
Wine tourism bụ ụdị nke njem jikọrọ ya na mmanya, ihe anyị nwekwara ike ịhụ n'ọtụtụ mpaghara Spain ndị ama maka mmanya ha. Ebe dịka La Rioja, Catalonia, Galicia ma ọ bụ Andalusia Site na mmanya ha Jerez, ha nwere ụka nke mmalite nke na-adọta uche nke ọtụtụ narị ndị njem nlegharị anya na-achọ ịbịaru ebe a na-emepụta ihe iji hụ ebe a na-emepụta mmanya na ubi vaịn ma nwee ọ theụ na mmanya ahụ n'ozuzu ya, na mgbakwunye na-atọ ụtọ ma ọ bụ ọmụmụ.
Typedị njem a dị nso nso a, ebe ọ bụ na njem nlegharị anya dabere na echiche obibi obibi apụtawo afọ ole na ole gara aga. Nnukwu njem na-ebibi mpaghara ma n'ọtụtụ oge na-eme ka oghere okike mebie. Ọ bụ ya mere ihe ọhụụ njem nlegharị anya obibi nke emebere iji mata ka ndị ahụ nwee obi ụtọ ibi ndụ obibi wee nwee ike ịga njem ma na-echekwa gburugburu ebe obibi ahụ. Elslọ oriri na ọ Hotụ areụ dị gburugburu ebe obibi ma na-anụkarị ya na mpaghara okike ị nwere ike ịnụ ụtọ ịmụ ihe site na okike na-emebi ya.
Njem njem njem na-agbadoro ndị ahụ na-arụsi ọrụ ike na ndị na-enwe ụdị egwuregwu niile. N'ebe ndị dị ka ụsọ oké osimiri nke ụsọ Oké Osimiri Cantabrian ma ọ bụ n'ụsọ oké osimiri Andalus, anyị na-ahụ oke osimiri dị mma maka egwuregwu dịka sọọfụ ma ọ bụ kitesurfing, yana ụlọ akwụkwọ ndị amalitela egwuregwu ahụ. Enwekwara ọtụtụ ebe na Spain ị ga-eme egwuregwu dịka ịgagharị ebe okike, site na Galicia ruo Asturias ma ọ bụ Catalonia. Ọ bụ ezie na taa ọ dị mfe ịchọta ebe nwere ụzọ ụkwụ ọhụụ ị ga-aga.
ime njem ime obodo
Njem nlegharị anya nke ime obodo bụ nke toro n'ime ime obodo na nke dị jụụ, na ụlọ obibi ndị mara mma a rụgharịrị ọhụrụ iji nwee ndụ ndụ dị jụụ. Ebe dị ka Galicia bụ ọkachamara na ụdị njem a. Nọ na ụlọ mara mma nke ime obodo, nke ihe okike gbara gbara gburugburu bụ ihe okomoko taa iji gbanahụ obodo ahụ.
Nke a bụ ụdị njem nleta ọzọ anyị nwere ike ịchọta na Spain n'oge oge oyi. Ebe ndị dị ka ndagwurugwu Arán na Lleida, ndị Puerto de Navacerrada na Madrid, igkpụrụ dị na Huesca ma ọ bụ Sierra Nevada na Granada bụ ụfọdụ n'ime ebe ndị na-enye ebe ntụrụndụ a kwadebere na ụdị ebe niile, ebe obibi na ihe ọchị maka ezinụlọ dum.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ofdị njem na Spain
Nudist osimiri Almería ị kwesịrị ịga leta
El Cañuelo osimiri